LEHIBEN’ NY FARITRA ANDROY : « Handraindrain’ny Malagasy tena hitondra fampandrosoana ny Iem »
Tany lavitra andriana ary isan’ireo Faritra voasokajy ho farahilan’ olona amin’ ny lafiny fampandrosoana ny Faritra Androy tato anatin’ny taona amaro izay. 9 janvier 2019
Amin’ izao fahazoan’ i Madagasikara Filoham-pirenena vaovao izao dia manantena ary miandrandra fampandrosoana avy amin’ ny prôgraman’asa Iem izay nampanantenain’ny filoha Andry Rajoelina ny vahoaka any an-toerana, hoy ny fanazavana noentin’ ny Lehiben’ ny Faritra Androy, Ny Kôlônely Randrianiriana Michael.
“ Ny velirano Iem an’ ny Filoha Andry Rajoelina dia mifandraika amin’ ny drafi-pampandrosoana ny Faritra nataonay. Hiditra amin’ ny “Plan de mise en oeuvre” na Pmo izahay izao ka mifameno tsara amin’ ny Iem izany ”, hoy hatrany ny fanazavany. Noraisiny ho ohatra tamin’ izany ny ady amin’ ny tsy fandriampahalemana izay mampijaly ireo mponina amin’ ny Distrika maro ao anatin’ny Faritra. Tafiditra ao anatin’ ny Iem, ary iray amin’ ireo velirano 13 ny ady amin’ ny asan-dahalo.
Hahazo tombontsoa mivantana amin’ izany ny vahoaka ao amin’ ny Faritra Androy satria ho foana ny asan-dahalo ka mba ho afaka hihary am-pilaminana ny vahoaka. Nohamafisin’ ny Lehiben’ ny Faritra fa manoloana ny fahazoana Filohan’ ny Repoblika vaovao dia manantena fiovana goavana ny Faritra. Antenain-dry zareo ny fanamboarana ny Lalam-pirenena faha-13, ny Lalam-pirenena faha-10 izay mampitohy an’ Ambovombe Androy amin’ Andranovory. Ny fahavitan’ ireo lalana ireo, dia hisy fiantraikany mivantana amin’ ny fihatsaran’ ny sosialim-bahoaka. Eo koa anefa ny fanantenan’ izy ireo ny amin’ ny hivahan’ ny olana momba ny famatsian-drano, na rano fisotro, na rano entina mikarakara ny fambolena. Tafiditra ao anatin’ ny Iem mihitsy io vahaolana momba ny rano fisotro madio io.
Manoloana ny voka-pifidianana farany navoakan’ ny Hcc, niarahaba ny Filoham-pirenena vaovao Lehiben’ ny Faritra Androy ; “ Miarahaba anao izahay ao anatin’ ny Faritra Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina. Naneho ny safidiny ny Malagasy iray manontolo amin’ izay tiany hitondra ny Firenena ao anatin’ny dimy taona. Miantso ny vahoaka rehetra aho mba hifanotrona sy hifanome tanana aminao amin’ ny asa fampandrosoana ”.